Lixdi daqiiqo ee ugu dambeysay diyaaraddi Itoobiya ee Burburtay - BBC News Somali
Xigashada Sawirka, JOEL SAGET
Diyaaradda 737 halka ay duuliyeyaasha ka duuliyaan
Sida uu dhigayo nidaamka caalamiga ee lagu baaro shilalka diyaaradaha waxaa baaritaanka shilka diyaaradeed ee ku yimid diyaaraddi Itoobiya ay lahayd ka qayb qaatay khubaro kala duwan waxayna toddobaadkii hore soo saareen warbixintoodi baaritaanka ee ugu horreysay waxaana soo baxay faahfaahin ku saabsan lixdi daqiiqo ee ugu dambeysay diyaaraddi Itoobiya ee Burburtay.
Warbixinta hordhaca ah ee la soo saaray oo shilka diyaaradeed ku saabsan waxay ku saleysan tahay xogta laga helay sanduuqa madow ee xogta diyaaradda keydiyo oo ay guddiga baaritaanka waddo ay dhageysteen.
Waxayna ka heleen xog faahfaahsan oo ku saabsan shaqaalaha dhulka jooga ee haga duullimaadka diyaaradaha iyo duuliyeyaasha diyaaradda xogihi ay lixda daqiiqo ee ugu dambeysay isdhaafsadeen.
Diyaaradda Itoobiya uu lambarkeeda duullimaadka uu ahaa ET302, nooceedu ahaa Boeing 737 Max 8 oo sidda rakaab dhan 157 oo ay shaqaalaha diyaaradduna ka mid yihiin March 10, 2019-ka waxay iisu diyaarisay iney u duusho magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Haddaba siduu ahaa xaalka diyaaradda burburtay lixdi daqiiqo ee ugu dambeeye?
08:37:34- Subaxnimo markay saacaddu ahaydshaqaalaha hagaduullimaadka diyaaradaha waxay diyaaradda u oggolaadeen iney duusha isla-markaana ay raadaarka kala soo xiriirto mowjadda 119.7 Herz.
Shaqaalaha hagaduullimaadka diyaaradaha inta ay diyaaraddu siinin fasaxa iney duusha (Tech off clearance) waxay xaqiijinayaan arrima dhawr ah.
Waxaana arrimahaasi ka mid ah iney jiraan diyaarado isku meel ka duulayo ama ka soo dagayo iyo in rakaabka loo sharraxay xogta duullimaadka la xiriira iyo shil hadduu dhaca sida ay iisu badbaadin karaan.
Xigashada Sawirka, HASSAN/FEKRUDIN
Duuliyeyaasha diyaaradda burburtay Yaareed iyo Maxammed
Intaa kaddib diyaaraddu waxay u dhaqaaqday waddadi ay ku duuli lahay (runway) diyaaraddana waxaa loo oggolaaday iney ku duusha waddada 7aad ee dhanka midig Airboorka kaga yaalla.
Duuliye ka tirsan guddiga baaritaanka shilka ku howlan oo magaciisa qariyey oo xogtan la wadaagay BBC laanteeda amxaariga wuxuu sheegay, markay diyaaraddu isku aaddiso waxay duuliyeyaasha iyo shaqaalaha kale ee diyaaradda ay rakaabka u sheegayaan diyaaradda lambarkeeda duullimaadka iyo halka ay ku socoto.
Tusaale ahaan diyaaradaha lambarkooda duullimaadka uu ka billowdo ET3xx waxay u duulaan waddamada geeska Afrika ku yaalla, diyaaradaha lambarkooda duullimaadka uu ka billowdo ET5xx waxay u duulaan waqooyiga iyo Koonfurta Mareykanka, diyaaradaha lambarkooda duullimaadka uu ka billowdo ET6xx waxay u duulaan waddama ku yaalla bariga qaaradda Aasiya.
Itoobiya oo guddoontay diyaaraddi Tobanaad ee Airbus-350
08፡37፡34 - Subaxnimo markay saacaddu ahaydwuxuu duuliyaha diyaaradda uu sheegayiney diyaradda duullimaadkeeda billaawday.
08፡38፡44 - Subaxnimo markay saacaddu ahaydoo ay diyaaraddu kacday oo ay 1 daqiiqo iyo ilbiriqsiyo hawada ku jirta qalabka loo yaqanno Angle of attack Censor oo ku yaallo diyaaradda labadeeda baal ayaa calaamad muujineyso inuu qalabkaasi si sax ah u shaqeeyneyn ku wargeliyey duuliyeyaasha.
Diyaarad ay leedahay shirkadda diyaaradaha Itoobiya
08፡38፡46 - Subaxnimo markay saacaddu ahayd wuxuu duuliyaha labaad uu duuliyaha koobaad uu ku wargeliyey inuu qalabka ''Master Caution Anti-Ice'' uu si sax ah u shaqeeyneyn iney farriin (Master Caution) ay diyaaradda ka soo gaartay.
Qalabkan ''Master Caution Anti-Ice'' wuxuu qabtaa diyaaradda haddii ay baraf ama qaboow saa'id ah ay la kulanto qalabka kuleylka ay ka hesho.
Farriinta ah iney cillad jirto (Master Caution) waxay diyaaradda soo dirtaa markay diyaaraddu cillad la soo deristo noocuu doonaba ha ahaadee.
08፡38፡58 -Subaxnimo markay saacaddu ahayd Duuliyaha koobaad wuxuu isku dayay inu amar siiyo habka duulista diyaaradda ee Combiyuutarka 'auto pilot' haddana waxay diyaaraddu markale soo dirtay farriin ah inuu nidaamkaasi shaqeyneyn oo wax amar ah uusan qaadan karin.
'Auto Pilot'- wuxuu awood u leeyahay inuu si iskii ah uu diyaaradda u duuliyo iyada ay duuliyeyaasha kaalin badan ku laheen duulinta diyaaradda.
Laba ilbiriqsi kaddib Saacaddu markay mareysay 08፡39፡00 - wuxuu duuliyaha koobaad uu isku dayay inuu 'auto pilot' marka kale jowlgeliyo haddana digniin kale ayaa diyaaradda uga timid oo sheegeyso inuu habkaasi gabi ahaanba uusan shaqeeyneyn.
08፡39፡06 - Shan ilbiriqsi kaddib duuliyaha koobaad wuxuu amray duuliyaha labaad inuu la xiriiro shaqaalaha haga duullimaadka diyaaradaha uuna ku wargeliyo cilladaha soo wajahay. Wuxuuna duuliyaha labaad uu fooneeyaha uu ku gudbiyey farriintan ''SHALA 2A departure crossing 8400 ft and climbing FL 320'' sidaa ayuuna warbixinta u gudbiyey.
Marka uu duuliyaha labaad uu leeyahay 'SHALA 2A' wuxuu ula jeedaa diyaaradda iney hayso waddada diyaaradda ee Addis Abab iyo NAirobi isku xirto ayna diyaaradda hadda mareyso 8,400 oo feet, iyada oo sida caadiga diyaarada marka ay waddadeeda qabsato laga rabo iney ku duusho 32,000 oo feet.
08፡39፡45 - Subaxnimo markay saacaddu ahayd wuxuu duuliyaha koobaad uu duuliyaha labaad uu ku yiri (Flaps up), duuliyaha labaadna amarka duuliyaha koobaad ayuu qaatay. Flaps waxaa la yirahdaa habka diyaaradda ka caawinayo iney hesho awood ay hawada ku sii gasho balse duuliyeyasha waxay la kulmeen iney diyaaraddu kor u duulista ka diiddan tahay.
Baroordiiq ka dhacday Itoobiya
08፡39፡50 - Subaxnimo markay saacaddu mareyso diyaaraddu oo ku socotay jihada 072 waxay u jaheeysatay 197 degree.
08፡39፡55 - Subaxnimo markay saacaddu ahayd diyaaraddu waxaa gabi ahaanba laga soo celiyey 'Disengaged from Auto Pilot'.
08፡39፡57 - Subaxnimo markay saacaddu ahayd duuliyaha labaad oo amar ka helay duuliyaha koobaad wuxuu shaqaalaha haga duullimaadka diyaaradaha uu ku wargeliyey iney diyaaraddu hawada geli la'adahay oo dhibaato halkaa kala soo deristay.
08፡40፡03-Subaxnimo markay saacaddu mareyso habka ''Ground Proximity Warning System (GPWS)'' wuxuu billaabay inuu diyaaradda ku amro iney hoos u socon (DON'T SINK) oo ay kor u kacdo.
Qalabkanna wuxuu fal galaa oo keli ah markay diyaaraddu ay wax duqeyneyso ama ay gabi ahaanba burbureyso wuxuuna farriin adag uu habkaasi u soo diraa duuliyaha.
08፡40፡03 ilaa 08፡40፡31- 28-ka ilbiriqsi ee u dhaxeeysay seddex farriimood oo (GPWS) oo ah (DON'T SINK) ayay diyaaraddu soo dirtay.
08፡40፡27 - Subaxnimo markay saacaddu mareyso duuliyaha koobaad wuxuu duuliyaha labaad uu ka codsaday inuu ka caawiyo sidi uu afka diyaaradda uu kor ugu qaadi lahaa.
08፡40፡44 - Duuliyaha koobaad seedex jeer ayuu yiri 'Kor u qaad' (Pull Up) duuliyaha labaadna sida lagu amray ayuu sameeyey.
08፡40፡50 - Duuliyaha labaad oo codsiga duuliyaha koobaad fulinaya wuxuu shaqaalaha haga duullimaadka diyaaradda uu ku wargeliyey iney diyaaradda ku sii haynayaan 19,000 oo feet maadaamaa ay dhibaato kala kulmeen diyaaradda oo ay madaxa kor u qaadi la'dahay.
08፡41፡30 - Markay saacaddu mareyso mar labaad ayey labada duuliye isku dayeen iney diyaaradda afkeeda kor u qaadaan balse haddana uma suuragelin.
08፡42፡10- Duuliyaha koobaad wuxuu duuliyaha labaad uu ku amray inuu shaqaalaha haga duullimaadyada uu la xiriiro uuna u sheego inuu doonayo inuu diyaaradda soo celiyo, waxaana duuliyaha loo oggolaaday inuu diyaaradda ku soo celiyo Addis Ababa.
Maraykanka oo Boeing ku wargaliyay in ay hubiso badqabka diyaaradaheeda
08፡42፡30 - Waxay diyaaradda ET302 ku amreen iney midig u leexato oo ay qabsato 260 degree duuliyeyaashuna sida lagu amray ayey sameeyeen.
08፡43፡04 - Markay saacaddu mareyso mar seddexaad ayey labada duuliye isku dayeen iney diyaaradda afkeeda kor u qaadaan balse haddana uma suuragelin oo waxay xaqiiqsadeen iney cillad weyn jirto.
Waxayna diyaaraddu markiba billaawday iney madaxa foorariso hoosna u socota, waxay foorarsatay 40 degree.
Duuliyaha magaciisa qariyey ee BBC u warramay wuxuu sheegay diyaaradda caafimaadka qabta markay dageyso ama ay rabto iney soo caga dhigato waxaa loo oggol yahay iney afkeeda foorariso oo keli ah 3 degree tani laakiin 40 degree ayuu madaxeeda hoos u jeeday.
08፡43፡43- Saacaddu marka ahayd qalabka wax duubayey duubista waa uu joojiyey oo diyaaradda wey burburtay.
Shaqaalihi hagayey duulimaadka diyaaradda oo diyaaradda burburtay xiriirka la sameeynayey waxay waaxda baaritaanka shilalka diyaaradda ay ku wargeliyeen iney diyaaraddu burburtay. Daqiiqado kaddibna waxaa la maqlay iney diyaaradda Itoobiya ee ET302 iney burburtay.
Xigashada Sawirka, ETHIOPIAN AIRLINES
Maareeyaha Shirkadda Diyaaradaha Itoobiya Tewelde Gabre-maryaam o ka hadlay warbixinta hordhaca ee la soo jeediyey wuxuu sheegay "Duuliyeyasha diyaaradda burburtay si kasta oo ay xaalad adag oo ay diyaaradda ku badbaadin waayeen haddana tallaabbooyinka geesinimada leh ee ay qaadeen iney muujineyso aqoonta qotoda dheer ee ay leeyihiin tasina ay sharaf u tahay shirkadda diyaaradaha Itoobiya."
Aabbaha dhalay duuliye Yaareed Getaachew wuxuu BBC u sheegay "inuu wiilkiisu waxkasta oo uu awoodo inuu diyaaradda ku xakameeyo uu sameeyey inkasta oo geerida ku timid uu ka xun yahay haddana uu si geesinimo leh u waajibkiisa shaqo uu u gutay."
TOOS Maxay tahay sababta mucaaradka Dowlad Deegaanka Soomaalida ay u qaadaceen doorashada?